Geelaha Jabuuti iyo ka Eritrea oo isku arkaya Magaalada Addis ababa. – Xeernews24
Geelaha Jabuuti iyo ka Eritrea oo isku arkaya Magaalada Addis ababa.
Maagalada Addis ababa ee Caasimadda Dalka Itoobiya waxaa maanta ka furmyaya shir ay yeelanayaan Wasiirrada arrimaha dibadda ee Urur Goboleedka IGAD.
Shirkan ayaa waxaa ajendayaashiisa ka mid ah in lagu saxiixo heshiiska kama dambeysta ah ee ay gaadheen dhinacyada dalka Koonfurta Suudaan iyo in Ururka ay dib ugu soo biirto Dowladda Eritrea oo tobankii sanno ee la soo dhaafay ka maqneyd.
Kulanka Wasiirrada arrimaha dibadda waxaa xiga kulanka madaxweynayaasha dalalka ku jira IGAD,waxaana marka ay ku biirto Eritrea kaddib Addis ababa tagaya Madaxweynaha Eritea iyo Madaxwynaya Jabuuti.
Waddamada Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa ay tobankii sanno ee la soo dhaafay ku kala tagsanaayeen muran dhinaca sohdinta ah.
Dadaalka la isugu keenayo Dalalka Eritrea iyo Jabuuti waxaa iska kaashanaya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya,waxaana todobaadkii hore Wasiirrada arrimaha dibadda ee labada dal iyo dhiggooda Eritrea ay tageen Jabuuti halkaas oo uu kulan ku dhexmaray islamarkaana heshiis horudhac ah lagu gaadhay
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/iog-and-afowerki.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-12 12:39:282018-09-12 12:39:28Geelaha Jabuuti iyo ka Eritrea oo isku arkaya Magaalada Addis ababa.
Warqad Furan oo ku socota gudoomiyaha cusub ee gobolka Sitti Shirkadda Imaaraadka ee DP World oo hanjabaad cusub ka bixisay go’aankii dawlada...